Kuchinja Kwekushambadzira Funnel? | Martech Zone
Muvhuro, Kukadzi 18, 2013 Muvhuro, Kukadzi 18, 2013 Jenn Lisak Golding
Sezvo isu tese tichiziva, kutengesa uye kushambadzira kuri kuramba kuchichinja. Naizvozvo, izvo zvekutengesa uye zvekushambadzira funnels zviri kuchinja. Kunyangwe isu tingave tisingazvifarire, isu tinofanirwa kuchinjika.
RainToday.com ichangobva kuburitsa chinyorwa pamusoro wenyaya uyu chaiwo, uine yedu pachedu kushambadzira automation vanotsigira, Right On Inopindirana. Troy Burk, CEO uye muvambi, anoita mamwe mapoinzi akanaka. Asi pane imwe nzwisiso inotyisa kune vanoshambadzira:
Sekureva kweForrester Research, ingangoita hafu yevashambadzi veB2B vanoti vanovhara isingasviki 4% yevatengesi-vanogadzirwa. Uyezve, pasi pe25% yemari yese inonzi yakashambadzirwa.
Saiye mushambadzi, ndiko kutsvaga kunotyisa. Funga nezvazvo - ibasa redu kugadzira zvinotungamira uye kuvachengeta. Kana isu tichingoshandura chete 4%, saka edu e-c-level vatongi vangangodaro vasina kufara nesu uye vasingade kushandisa bhajeti pane zvatinoita Kunyangwe iyi nhamba, izvi hazvisizvo zvachose.
Isu tinofanirwa kune chero nemasangano ese. Muchokwadi, nepo chingangoita makumi manomwe neshanu muzana emari inowanikwa kubva kumusoro-kutengesa uye kuendesa, mabhajeti mazhinji ekushambadzira ari kuenda mukugadzira nekusimudzira mitsva mitsva mumusika wekutengesa. Isu tinogoneka! Uye inodiwa.
Dambudziko rese munyika yanhasi yedhijitari kuenzanisa kutengesa uye kushambadzira. Pachivanhu, aya agara ari maviri akapatsanuka madhipatimendi. Zvisinei kana ivo vari kana vasiri muzera idzva, zvakakosha kuti marongero ekushambadza uye marongero ekutengesa aenderane uye ave nehurongwa hwepamutemo munzvimbo kuitira kuti ruoko rurege kumira uye rwakakodzera nguva. Kushambadzira otomatiki inzira yekuita izvi. Kutengesa kunotumira kushambadza email kero nyowani yekutungamira, kushambadzira kunovawedzera kuhurongwa, iyo yekushambadzira otomatiki inogadzira uye inoteedzera chimiro chemutengi, uye mapato ese ari maviri "ave kuziva" nezve izvo tarisiro iri kuita uye kana vari kuzviita. Izvo hazvisi nguva dzese kufamba kwebasa, asi iri chokwadi hwaro hweiyo inogona kuve nzira yakabudirira yekuvhara yakawanda inotungamira yekushambadzira.
Izvo zvinangwa zvekushambadzira fanera uye yekutengesa fanera inogona kunge yakasiyana, asi iko kudaidza-kune-chiito uye kushambadzira lifecycle yakafanana, kubva padigital maonero. Wadii kushanda pamwechete?
Kushambadzira nekutengesa zvakakosha zvakaenzana pakushambadzira kwehupenyu - ngatiregei kurwa titange kushanda tiri pamwe chete.
Tags: kutauriranamarketing automationmarketing marketingKufungidzirasales salesnel
M-Commerce iri Kugadzira Musoro
Kukadzi 18, 2013 na1: 40 PM
Iyi zvirokwazvo iri nyaya yandakasangana nayo zvakare. Hazvireve hazvo kuti pane chero rudo rwakarasika pakati pekutengesa nekutengesa, asi kuti isu tine zvakasiyana kukoshesa. Kushambadzira (munyika yangu) ndezvemametric uye ROI (pamwe chigadzirwa chekugara uchiratidza kukosha kwedu), nepo kutengesa kuri kunetsekana nezve kudyidzana kamwechete uye kuvhara mutengi mumwe nemumwe panguva.
Kubvisa kwedu kukuru kuri kwekungoteedzera fanera zvachose kuburikidza neyakavhara nzira yekutengesa. Ini ndinogona kuteedzera zvinotungamira zvatinounza, asi isu tinofanirwa kuvimba nevashandi vekutengesa kuti vatore uye vateedzere iyo chaiyo mari nenzira, izvo zvisiri izvo nguva dzose. Sanganisa icho pamwe nenyaya yekuti muindasitiri yedu (yakanyanya kudhura mari masevhisi, kazhinji), edu anotungamira anogona kuuya kubva kunhamba chero mazana emazana ekubata, uye kunyatso rovera pasi ROI pane chero chiitiko chingave chakaomarara.
Kukadzi 18, 2013 na2: 56 PM
Kutenda nemhinduro, Tyler! Ini ndinobvumirana nekomendi yako pamusoro pezvakasiyana zvakakosha. Icho ichokwadi kwazvo. Asi ini ndinofunga kuti kana isu tese tikaziva kuti kuyedza kwedu kuri kushanda kuenda kuchinangwa chimwe chete nekuita zviitiko zvakasiyana, saka tinogona kuenzanisa zvatinoisa pakutanga nenzira iri nani (uye takohwa mibairo!).
Kusvika pane ROI inoenda, ini ndagara ndichifunga kuti zvainetsa kuona ROI yekutengesa kana kushambadzira izere. Pane zviitiko zvatinoita izvo zvisingakwanise kuva ne "mutengo weti" pavari. Chokwadi, mutengesi anogona kuve nekofi ine tarisiro inogona uye ivo vakangodzvanya, ndipo ndipo tarisiro iyoyo payakasarudza kuti vaida kushanda nekambani iyoyo. Asi iko kushandurwa hakuna kuitika kusvika mwedzi miviri gare gare nekuda kwezvimwe zvemukati kana zvekunze zvinhu. Mune "nzvimbo dzakawanda dzekubata" pasi, hatizive patakakonzera. Ndezvipi zviitiko zvinofanirwa kunge zvine ROI? Zvese hazvina kujeka uye zvakaoma kuziva.
Kukadzi 18, 2013 na3: 36 PM
Ini zvirokwazvo ndinobvuma. Haisi dambudziko riri nyore kugadzirisa. Maitiro angu ndeekuti nyatso ita nhamba yekuongorora kubva kumusoro chaiko kwenzvimbo yako uye uone kuti ndeapi marudzi ezviitiko akakosha kwazvo kwauri.
Saka, semuenzaniso kana iwe ukataura kuti 2% ye organic traffic pane yako saiti inotumira chikumbiro cherimwe ruzivo, uye yeiyo 2%, 30% inozopedzisira yachinja kuita zvekutengesa, uye izvo zvekutengesa zvakazara $ 100k, ipapo unogona kuita ongororo ku fungidzira kukosha kweumwe neumwe mutsva mushanyi mushanyi waunogadzira - zvine mutsindo ROI yakasungirirwa yakanangana neako SEO nguva / simba.
Iwe uri kutaura chokwadi kuti akawanda ekubata mapoinzi anoomesa izvo, zvakadaro. Ah - vimba neni - ndinoziva zvese nezve izvo. Asi, ini ndinofunga isu tinofanirwa kunge tine zviyero zvekufungidzira kuitira kuti tiwedzere mashandiro edu, kukwidziridza madhora edu, uye kugadzirisa nguva yedu. (semuenzaniso, isu tinofanirwa kushandisa mamwe maawa gumi pamwedzi tichishanda paSEO? - zvakanaka regai titarise mutengo kana kudzoka).
Kukadzi 18, 2013 na3: 40 PM
Pfungwa huru, Tyler. Kutenda nepfungwa dzako! Ingoteera iwe pa Twitter. Kutarisira kunzwa zvakawanda.